Musharaxa Donald Trump oo ugu dambeyn si mucjiso leh ugu guuleystay doorashada Mareykanka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Musharaxa Donald Trump oo ugu dambeyn si mucjiso leh ugu guuleystay doorashada Mareykanka
Waxaa doorashadii madaxweynaha Mareykanka ugu dambeyn si mucjiso leh ugu guuleystay ninka maal-qabeynka ah ee Donald Trump, kaas oo noqonaya madaxweynihii 45-aad ee dalkaasi uu yeesho.
Donald Trump oo la tartamaayay musharaxa kale ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa doorashada kaga guuleystay codad gaaraya 289, halka Mrs. Clinton ay heshay codad gaaraya 218.
Gobolada ugu muhiimsanaa in codadka badan lagu helo doorashadaasi ayaa waxay ahaayeen Florida, North Carolina, Ohio, Iowa, waxaana dhamaan goboladaasi codadkooda helay musharaxa Jamhuuriga ee Donald Trump.
Guusha Donald Trump ayaa lagu dhawaaqay iyadoo ay weli harsan yihiin tirinta codadka gobolo kale oo ay ku horeeysay Mrs. Hillary Clinton, inkastoo hadii ay hesho codadkaasi xitaa aysan waxba u tareynin.
Waxaa maalmihii ugu dambeysay la saadaalinaayay in Mrs. Hillary Clinton ay ku guuleysan doonto doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka, balse aysan arrintaasi dhicin.
Donald Trump ayaa taageero aad u weyn ka heystay dadka dabaqada dhexe ee kasoo horjeeda hoos u dhaca ku yimid dakhligooda, islamarkaana diidanaa qorshaha ay Hillary Clinton ololeheeda doorasho kusoo gashay.
Kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada waxa uu Donald Trump khudbad ka jeediyay magaalada New York oo ahayd halkii uu ku dhashay islamarkaana uu haatan degan yahay, waxaana uu sheegay inay qadka teleefanka kula soo xiriirtay Mrs. Hillary Clinton islaamrkaana ay ugu hambalyeysay guusha uu ka gaaray doorashada.
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa khudbad ka duwan kuwiisi hore jeediyay, waxaana uu sheegay inuu madaxweyne u noqonayo dhamaan dadka Ameerika, noockasta oo ay yihiin.
Ugu dambeyntii, Donald Trump ayaa sheegay inuu dalka dib u dhisi doono, islamarkaana dadka oo dhan uu mideyn doono, iyadoona hadalada khudbadiisa ay u badneyd mid uu uga mahad-celinaayo dadkii sida weyn ugala soo shaqeeyay ololihii doorasho iyo dadkii codadkooda siiyay.